यस्तो छ आज (अाईतबार २०७६ पौष २६) को राशीफल -
यस्तो छ आज (अाईतबार २०७६ पौष २६) को राशीफल
२०७६, २७ पुष आईतवार ०४:०३ January 12, 2020 clickonLeaveaComment on यस्तो छ आज (अाईतबार २०७६ पौष २६) को राशीफल
धेर नखानुहोस् र तन्दुरूस्त हुनको लागि नियमित रूपमा स्वास्थ्य क्लब जानुहोस्। आवश्यक परेमा मित्रहरूले तपाईंको सहायता गर्नेछन्। आज तपाईं मुटु फुट्नबाट बच्नुहुनेछ। आज, तपाईं आफ्नो जीवनसाथीसँग बाहिर गएर रमाइलो समय सँगै बिताउनु हुनेछ।
आफ्नो विचार व्यक्त गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। विश्वासको कमी हुन नदिनुहोस् किनकि यसले मात्रै तपाईंको समस्या जटिल हुनेछ र आफ्नो प्रगतिमा बाधा आउन सक्छ। आफैमा विश्वास गरेर पुनः आफ्नो मुस्कान पुन प्राप्त गर्ने र समस्या सल्टाउने प्रयास गर्नुहोस्। आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको भावनामा चोट लाग्नुबाट जोगिन आफ्नो स्वभावमा नियन्त्रण गर्नुहोस्। नियमित वैवाहिक जीवनमा, यस दिनले स्वादिष्ट मिठाईको रूपमा कार्य
आज आफ्नो उँचो विश्वासलाई सदुपयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। व्यस्त दिन भए तापनि तपाईँले अझै पनि आफ्नो ऊर्जा फर्काएर ल्याउन सक्षम हुनुहुनेछ। आज तपाईंमा आफ्ना परिवारका सदस्यहरू र साथै साथीहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्नाले नयाँ उत्साह र आत्मविश्वास जाग्नेछ। तपाईं पहिलो नजरमा प्रेममा पर्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईं पूर्ण रूपमा राम्रो विचारको हुनुहुन्छ र तपाईंका रुचिका गतिविधिहरुले आफुले आशा गरेभन्दा धेर लाभ गराउने छन्। आफ्नो जोडीले आज तपाईंलाई खुसी बनाउने प्रयास गर्नेछन्।
एउटा लाभदायी दिन हो र तपाईं दीर्घ रोगबाट राहत पाउन सक्षम हुन सक्नुहुनेछ। टाढाका आफन्तबाट आएको अप्रत्याशित समाचारले तपाईँको दिन उज्यालो पार्नेछ। तपाईंकी प्रियतमाले पूरा दिन नराम्ररी तपाईंको सम्झना गर्नेछिन्। एउटा आश्चर्य मिलाउनुहोस् र यो दिनलाई आफ्नो जीवनको सबैभन्दा सुन्दर दिन बनाउनुहोस्। विवाह दैवले मिलाउँछ; आफ्नो जोडीले आज तपाईंलाई यो साबित गर्नेछन्।
तपाईंहरू कसैलाई आज महत्वपूर्ण निर्णय लिन बाध्य हुनु पर्ने हुन सक्छ जसले गर्दा परेशान र त्रसित हुन सक्नु हुन्छ। पुराना सम्पर्क र मित्रहरू सहयोगी हुनेछन्। प्रेम यात्रा मीठो तर छोटो हुनेछ। दिनमा आफ्नो जोडीसित तपाईंको तर्क हुन सक्छ, तर यो आज राती खानाको समयमा समाधान हुनेछ।
विनोदी आफन्तहरूको साथ पाएपछि तपाईंको तनाउ कम हुनेछ र तपाईंलाई धेरै आवश्यक परेको राहत पाउनुहुनेछ। तपाईं यस्ता आफन्तहरू पाएर भाग्यमानी हुनुहुन्छ। घरेलु कामले तपाईंलाई अधिकांश समय व्यस्त राख्नेछ। तपाईंले उनीलाई पर्याप्त ध्यान दिनुभएन भने प्रेमी दुखी हुनेछन्। आफ्नो प्रतिष्ठामा हानि गराउने मान्छेसँगको सङ्गत गर्न रोक्नुहोस्। आज तपाईं र तपाईंको जोडीले साँच्चै राम्रो खाना वा पेय लिनु हुनेछ, जसले स्वास्थ्यमा केही समस्या आउन सक्छ।
असुरक्षा अभिमुखीकरण हीनताको भावनाले चक्कर आउन सक्छ। आफ्नो परिवारका साथ गरेको सामाजिक गतिविधिले सबैलाई तनाउमुक्त र सुखद मुडमा राख्ने थियो। प्रेमीहरूको पारिवारिक भावना अत्यधिक विचारशील हुनेछ। आफ्नो जीवनमा आज विवाह सर्वश्रेष्ठ स्थानमा पुग्नेछ।
आज तपाईं ऊर्जावान हुनु हुनेछ, तपाईंले जे गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईंले साधारण रूपमा गर्ने भन्दा आधी समयमा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। तपाईंको निवेश र भविष्यको लक्ष्यबारे गोप्य हुनुहोस्। आफ्नो जोडीसँग राम्रो समझदारीले घरमा शान्ति, संवृद्धि र आनन्दमा ल्याउँछ। तपाईंको प्रेमी जीवनले आज सुन्दर रूप लिनेछ। तपाईंले प्रेममा हुनुको स्वर्गीय भावना प्राप्त गर्नुहुनेछ। विवाह आशिष् हो, र तपाईंले आज यसको अनुभव गर्नु हुनेछ।
आफ्नो निराशावादी मनोवृत्तिको कारण तपाईं कुनै प्रगति गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ। यो तपाईंलाई चिन्ताले आफ्नो सोच्ने शक्ति घटेको छ भन्ने महसुस गर्नको लागि सही समय हो। उज्यालो तर्फ हेर्नुहोस् र तपाईंले आफ्नो विवेकमा निश्चित परिवर्तन भएको पाउनु हुनेछ। तपाईंको ज्ञानको तिर्खाले नयाँ मित्र बनाउन मद्दत गर्नेछ। प्रेममा सफल बनाउनको लागि कसैलाई मद्दत गर्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो सम्पत्तिमा लापरवाह गर्नुभयो भने हानि वा चोरी हुन सक्छ। आज आफ्नो जीवनसाथीले तपाईंलाई एउटी परीले झै अतिरिक्त हेरचाह गर्नेछन्।
तपाईंको विनम्र व्यवहारको सराहना गरिनेछ। धेरै मानिसहरूले तपाईंको मौखिक रूपमा प्रशंसा गर्नेछन्। आफ्ना घरको श्रृंगारको लागि आफ्नो खाली समय प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंका परिवारले साँच्चै नै यसको कदर गर्नेछ। तपाईंले धेरै नै प्रेम गरेको व्यक्ति प्रति तपाईंको रूखो व्यवहारले सम्बन्धमा सामंजस्यता ल्याउन सक्दैन। दैनिक आवश्यकताहरू पूरा नगर्नाले तपाईंको वैवाहिक जीवनमा आज तनाउ हुनेछ। यो भोजन, सरसफाइ, अन्य घरेलू काम आदि जस्तै कुराहरूको बारेमा हुन सक्छ।
कामको दबाब र असामंजस्यले घरमा केही तनाउ ल्याउन सक्छ। आमाबाबुको स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ र तिनीहरूले तपाईंलाई आफ्नो प्रेमको वर्षा गर्नेछन्। अनपेक्षित रोमान्टिक झुकाव हुनेछ। तपाईंको वैवाहिक जीवन राम्रो बनाउने प्रयासले आज आशा गरेकोभन्दा राम्रो फल दिनेछ।
भौतिक लाभ र विशेष गरेर मानसिक सुदृढताको लागि मनन र योग सुरु गर्नुहोस्। धेरै लाभदायक दिन होइन, आफ्नो पैसाको अवस्था जाँच गरेर आफ्नो खर्च सीमित गर्नुहोस्। बिरामी भएको आफ्नो आफन्त हेर्न जानुहोस्। आज कार्डमा मित्रता हराउने सम्भावना उँचो छ र होशियार हुनुहोस्। आज खर्चको कारण आफ्नो जीवनसाथीसँग तपाईंको सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ।
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा कम्युनिष्टहरुलाई एकताबद्ध हुन आह्वान
आज पृथ्वी जयन्ती विविध कार्यक्रम गरेर मनाइँदै
तपाईंको आजको राशीफल ( बुधबार २०७६ असोज ८ ) – तपाईं सबैको दिन शुभ र मंगलमय रहोस
२०७६, ८ आश्विन बुधबार ००:३८ September 25, 2019 clickon
तपाई को राशीफल (बुधबार २०७६ मंसिर ४) – तपाईं सबैको दिन शुभ र मंगलमय रहोस
२०७६, ४ मंसिर बुधबार ०१:३७ November 20, 2019 clickon
तपाईंको आजको राशीफल (बिहिबार् २०७५ फाल्गुण ९) – तपाईं सबैको दिन शुभ र मंगलमय रहोस
२०७५, ९ फाल्गुन बिहीबार ०१:२६ February 21, 2019 clickon
आईपिएल – रोमाञ्चक सुपर ओभरमा दिल्ली विजयी
महानगरीय प्रहरी वृत्त थिमी र मातहतमा कार्यरत ६३ जना प्रहरीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि
ईंटा भट्टामा जिउँदै मान्छे जलाएको आरोपमा थुनामा रहेका सांसद तथा पूर्वमन्त्री अफताब आलमसम्बन्धी मुद्दाको फाइल मगाउने आदेश जारी
तपाईको (सोमबार अशोज ५) को राशीफल
लकडाउन खुले संगै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा उडानको चाप बढदै
सार्वजनिक यातायात त खुल्यो तर सामाजिक दुरी खोई ? स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेको खोई ??